San Htun's Diary: ကန်နွမ်ဘာ့ခ်သွား တောလား...
အောက်တိုဘာ ၁ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရုံးတွေ ရှပ်ဒေါင်းတော့ ကျွှန်မတို့ ရုံးလည်း ရှပ်ဒေါင်းပါတယ်။ ရုံးမတက်ရ၊ လစာလည်းမရ ရုံးခဏ ပိတ်လိုက်တာကို laidoff လေးအော့ဖ် ( အလုပ်ဖြုတ်ခံရခြင်း) လို့ မခေါ်ဘဲ Furlough ဖော်လုပ် (ခဏပိတ်ထားခြင်း) လို့ခေါ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေကတော့ unemployment benefit အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့် ရှိပါတယ်။ ရှပ်ဒေါင်းချိန်မှာ ပြတိုက်တွေ၊ ပန်းခြံတွေ ပိတ်တော့ ဒီစီကို သွားလည်လို့ မဖြစ်ဘူး။ အောက်တိုဘာ ၁၇ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ ကျွှန်မတို့ ရုံးက ပြန်မဖွင့်သေးဘူး။ အိမ်တွင်းအောင်းရတာ သုံးပတ်ရှိပြီ။ သီတင်းကျွှတ်တုန်းက မင်္ဂလာရာမဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သိခဲ့တဲ့ မမီးမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းက ပန်စယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အလှုလုပ်တာ သူတို့ တွေ သွားကြမှာ လိုက်မလားလို့ခေါ်တာနဲ့ခရီးလည်းထွက်ဖြစ်၊ မြန်မာအစားအစာတွေလည်း စားရ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ လည်း အသိမိတ်ဆွေဖြစ်၊ မြန်မာစကားတွေလည်း ပြောရတဲ့ ဒီတောလားလေး ဖြစ်လာပါတယ်။
သွားဖြစ်မယ် မသွားဖြစ်ဘူးနဲ့သောကြာနေ့ည ၉ နာရီလောက်မှ အတည်ဖြစ်သွားတဲ့ ခရီး။ တညအိပ်ခရီး ဟိုတယ်မှာတည်းမှာမဟုတ်ဘဲ အလှု့ ရှင်ရဲ့အသိအိမ်မှာ တည်းခိုမှာဆိုတော့ စောင်၊ ခေါင်းအုံး၊ မျက်နှာသုတ်ပါဝါ၊ ညဝတ်အင်္ကျီ၊ လိုအပ်တာတွေ ထုပ်ပိုးလို့စနေနေ့ မနက် ၅ နာရီမှာ အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ အစ်မတယောက်က မလိုက်ချင်တာကို အတင်းစည်းရုံးနေကြတာနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားတာထက် ၁ နာရီ နောက်ကျပြီးမှ ကျွှန်မကို လာခေါ်ပါတယ်။ မှောင်မှောင်မည်းမည်း အိမ်ကိုရှာနေရမှာ ခက်နေမှာစိုးလို့ချမ်းစိမ့်တဲ့အအေးဒဏ်ကို အံတုလို့၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းထိပ်မှာ စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။
သွားမဲ့မြို့လေးက အနောက်မြောက်ဖက်စူးစူး မိုင် ၂၅၀၊ ၄ နာရီခွဲလောက် မောင်းရမဲ့ ပစ့်ဘာ့ခ်မြို့ နားက ကန်နွမ်ဘာ့ခ်မြို့ လေးပါ။ ဒီနှစ် ဧပရယ် အိုင်အိုဝါကျောင်းကို သွားတုန်းက ပစ့်ဘာ့ခ်မြို့ မှာ ဘတ်စ်ကားပြောင်းစီးဖို့ခဏနားရတယ်။ တောင်ကုန်း၊ တောင်ဆင်း၊ မြို့ လယ်ကို ရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်နဲ့အင်မတန်မှ သာယာပါတယ်။ အလှုပြီးရင် ပစ့်ဘာ့ခ်မြို့ ကို ဝင်လည်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဟေ့။ မမီးမီးက မောင်းပြီး ကျွှန်မက ဘေးကနေ ဂျီပီအက်စ် ညွှန်တဲ့အတိုင်း သတိပေးတယ်။ နောက်ထပ် အစ်မသုံးယောက် မဝိုင်း၊ မသူ၊ မဖြူနဲ့ အသိမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွှန်မက အစ်မလို့ ခေါ်ပေမဲ့ တကယ်တော့ သူတို့ နဲ့ကျွှန်မက ၂၀ လောက် ကွာတယ်။ သူတို့ ကလည်း ကျွှန်မကို ညီမလို့ ခေါ်လိုက်၊ သမီးလို့ ခေါ်လိုက်။
မဝိုင်းက စတိတ်ရောက်တာ တော်တော်ကြာပြီ။ ခုသွားမဲ့မြို့ နားမှာ တက္ကသိုလ်မှာ သူ့ သမီးတက်နေတုန်း ရောက်ဖူးထားတော့ ဘာမရှိဘူးဆိုတာသိတော့ မလိုက်ချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ သူငယ်ချင်း မနီလာရဲ့ အလှုဆိုတော့လည်း မလိုက်လို့ မရ။ မဝိုင်းအိမ်မှာနေတာကက မသူ။ မသူရဲ့အမျိုးက မဖြူ။ မသူက စတိတ်ကို ဒီဗွီပေါက်လို့ ရောက်တာ တလလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အားလုံးထဲမှာ မမီးမီး တယောက်ပဲ ကားမောင်းတတ်တယ်။
အရင်တုန်းက မေရီလန်းပြည်နယ် ဖရက်ဒရစ်မြို့ နားမှာ ဆိုလာစက်ရုံကြီးရှိတာ တစက်ရုံလုံး မြန်မာတွေပဲတဲ့။ စက်ရုံလည်းပိတ်လိုက်ရော နစ်နာကြေးတွေ အများကြီးရလုို့တချို့ ဆို အိမ်တောင်ဝယ်နိုင်တယ်။ ထောက်ပံ့ကြေးလည်း နှစ်နှစ်လောက်ရလို့အလုပ်အသစ်မရှာဘဲ ထောက်ပံ့ကြေးလေးထုတ်လိုက်၊ ဝယ်လိုက်ကြ၊ ခြမ်းလိုက်ကြ၊ စားလိုက်ကြ၊ သောက်လိုက်ကြဆိုပဲ။ ပန်စယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဖက်မှာတော့ အိမ်ဈေးတွေ အတော်တန်တယ်။ မေရီလန်း၊ ဒီစီ၊ ဗာဂျီးနီးယားကတော့ ဈေးအမြောက်ဆုံး။ ကျွှန်မနေခဲ့တဲ့ ကန်တက်ကီပြည်နယ်မှာ အိမ်ဈေးသက်သာတယ်။ လူဝီဗီလ်မြို့ ဆိုရင် အငြိမ်းစားယူရင် နေထိုင်သင့်တဲ့ မြို့ တွေထဲမှာ ပါတယ်။
မနက်အစောကြီးထရလို့အိပ်ရေးမဝတာရယ်၊ ပေါင်မုန်စားလို့ရင်ပြည့်တာရယ်၊ ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်ရတာရယ်နဲ့မဝိုင်းက မူးတယ်။ ကျွှန်မမှာပါတယ့် ကျားတံဆိပ် မဟာဖြေဆေး၊ မန်ကျည်သီးချိုချဉ်၊ ပရုတ်ဆီရှုတော့မှ သက်သာတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း အေးတယ်။ လမ်းတလျှောက် ကလော၊ အောင်ပန်းဖက်ကို ခရီးထွက်ရသလိုပါပဲ။ တောင်ပြေပြေလေးတွေ၊ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးတွေ၊ ထွန်ယက်ထားတဲ့ မြေနီနီတွေ၊ ရိတ်သိမ်းပြီးလို့ဝါကျင်နေတဲ့ ရိုးပြတ်တွေ၊ ကြည်လင်နေတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ။
လမ်းပိတ်ထားလို့DeTour လုပ်တော့ ဂျီပီအက်စ် ညွှန်တဲ့အတိုင်း ကွေ့ ပတ်ပြီးမောင်း။ နေ့ လည် ၁၁ နာရီခွဲ အလှု့ ရှင်သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တော့ အိမ်မှာလူတယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားတော့ လမ်းတွေမှားပြီးမှ ရောက်တယ်။ ဓမ္မဂုဏ်ရည်ဘုန်းကြီးကျောင်းက တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်မှာ ရှိတာမို့အတော်စိမ့်ပြီး အေးတယ်။ မေရီလန်းက ဆရာတော်တွေအပါအဝင် ဆရာတော်အပါး ၂၀ ကျော်ကို ဖူးတွေ့ ရတယ်။ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့စားကောင်းလိုက်တာ။ ကျွှန်မက ထမီကို ဂျင်းဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ထပ်ဝတ်ပြီး ကွှန်းဗတ်ဖိနပ်နဲ့ ။ မသူက ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ထမီဝတ်ထားတော့ ပွယောင်းယောင်းကြီး။ အနီးအနားတဝိုက်က မြန်မာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ တော်တော်များများ လာကြပါတယ်။
မြန်မာစကားသံတွေ၊ မြန်မာအစားအသောက်တွေနဲ့ပျော်စရာကြီး။ စားသောက်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ကြတော့ ရှေ့ က ဦးဆောင်သွားတဲ့ကားက လမ်းဘေးရပ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ ရောက်ပြီလားပေါ့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ဓာတ်ပုံကြမယ်တဲ့။ အဲဒီနေရာကလေးကလည်း ရွှက်ဝါတွေ ကြွေလို့ ဝေလို့အတော်လှတယ်။ ဟိုဖက်ကားလမ်းကပေါ်က လူတွေကို ဒီဖက်ကားလမ်းပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်။ ဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နေမှန်းသိတော့ အရှိန်လျှော့မောင်း၊ စောင့်ပေးကြတယ်။ မကြီးသူငယ်ချင်း မနှင်းသီတာက ကျွှန်မဖေ့ဘွတ်က ဓာတ်ပုံမှာ လာမန့် သွားတယ်။ "ရွှက်ကြွေတောမှာ တစ်ယောက်တည်း အလွမ်းဓါတ်ခံ အဆွေးဓါတ်ခံ ရှိရင် သေလောက်တယ်"တဲ့။ ကျွှန်မကလည်း ပြန်မန့် တယ် "ဘယ်ကသာ လွှမ်းဆွေးချိန် ရှိပါ့မလဲ အစ်မရယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့ ရိုက်ပေးပါဦး ငါ့ရိုက်ပေးပါဦးနဲ့ဗြောင်းသတ်နေကြတာ ဘယ်မှာ လွှမ်းဆွေးလိမ့်မတုန်း"း) ။
တည်းခိုမဲ့အိမ်မှာ ညအိပ်မဲ့သူတွေက အိမ်ရှင်တွေအပါအဝင် ၁၉ ယောက်။ ကျွှန်မတို့၅ ယောက်က အပေါ်ထပ်မှာ တခန်း၊ အိမ်ရှင်တွေက တခန်း၊ အလှုရှင်တွေက တခန်း။ ကျန်တဲ့သူတွေက ဧည့်ခန်းမှာ ယောက်ျားလေးတွေ သတ်သတ်တခြမ်း၊ မိန်းကလေးတွေ သတ်သတ်တခြမ်း အိပ်ကြတယ်။ အသက်အကြီးဆုံး မဝိုင်းနဲ့ မသူကို ခုတင်မှာ အိပ်ခိုင်းပြီး ကျွှန်မနဲ့မဖြူက ကုတင်ဘေးအောက်၊ မမီးမီးက ခုတင်ခြေရင်းအောက်မှာ အိပ်ကြတယ်။ Sleeping Bag လိုမျိုးနဲ့အိပ်ရင်တောင် ကျောနာတတ်တဲ့ကျွှန်မ ကော်ဇောခင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ စောင်ပါးလေးခင်းပြီးတော့ အိပ်တယ်လို့ ကြားရင် ဆူနမ်တို့အရမ်းအံ့သြကြလိမ့်မယ်။ ရောက်ကတည်းက အိပ်လိုက်ကြ၊ စကားတွေ ပြောလိုက်ကြ။ ညဖက် မြစ်သုံးခုဆုံတဲ့နေရာ အရမ်းလှတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာကို သွားဖို့ လာခေါ်တာတောင် အအေးကြောက်တာနဲ့မလိုက်ကြဘူး။
ဗိုက်ဆာလို့အပြင်ထွက်စားမလို့ပြင်နေတုန်း အလှုရှင်မနီလာက သူ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ထမင်းကြော်တွေ ဝယ်လာပေးတယ်။ ခေါက်ဆွဲကြော်က အတော်စားကောင်းတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ ငါးပိရည်ကျိုရှိတာ့ ထမင်းကြော်ကုို အဆီအငေါ်မတည့် ငါးပိရည်နဲ့စားလိုက်သေးတယ်။ ငါးပိ မစားတာ ကြာလို့ လား မသိဘူး ကျွှန်မအတွက်တော့ ငန်လွန်းနေတယ်။ ငါးချဉ်သုတ်လေးကလည်း စားကောင်းလိုက်တာ။ စတိတ်ရောက်ကတည်းက မစားရတာ။ အောက်ထပ်က တညလုံး ဖဲရိုက်ကြ၊ စကားတွေပြောကြ၊ မနက်စောစောထပြီး အရုဏ်ဆွမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ကြတော့ နိုးလိုက်၊ အိပ်လိုက်။
စားပြီးကတည်းက အခန်းအောင်းပြီး အိပ်လိုက်ကြတာ အောက်ထပ်တောင် မဆင်းဘူး။ မနက်အစောကြီးထ ကားကို ၅ နာရီလောက် စီးခဲ့ရတာဆိုတော့ ပင်ပန်းနေပြီကိုး။ မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်ရှင်တွေက ကြာဇံချက်စားဆိုတာကို အားနာလို့မစားကြတော့ဘဲ မက်ဒေါနယ်စားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာလိုက်တာ အိမ်ရှင်ကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်စကား မဆိုခဲ့ဘူး။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဧည့်သည်တွေး) ။ မက်ဒေါနယ်မှာ မနက်စာစားကြတော့ ကြက်ဥ၊ နွားနို့ ၊ မြေပဲ အလာဂျီရှိတယ့် မဝိုင်းက အဲဒါတွေ မပါတဲ့ဟာ စားရတယ်။ ဒီရောက်မှ အဲဒီအလာဂျီ ဖြစ်တာတဲ့။
ဆရာတော်ကို ဝထ္ထုငွေကပ်ပြီး မဝိုင်းက သူ့ ယောက္ခမ ဆုံးသွားတာ ၁၅ နှစ်ပြည့်အဖြစ် ရေစက်ချ အမျှဝေတော့ တွေးမိတယ်။ ခုမှတွေ့ ဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု အတူတူလုပ်ပြီး ရေစက်ချအမျှဝေရမယ်လို့တခါမှ မတွေးမိဘူး။ ရေစက်တွေများနော်။ ဆရာတော်ဆီမှာ ငါးပါးသီလခံ တရားနာပြီးတော့ ဆရာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်။ ဆရာတော်တွေ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးတော့ အကျွှေးအမွှေး စပါတယ်။ ဒံပေါက်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သား၊ ကြက်သား၊ ငါးပတ်မွှေကြော်၊ ငံပြာရည်ကြော် အဲ သရက်ချဉ်လေးက အတော်စားကောင်းတယ်။ ဒါလည်း စတိတ်ရောက်ပြီး သုံးနှစ်ကြာမှ စားရတား) ။ ဆီထမင်း၊ ပဲပြုတ်၊ ဟာလဝါ၊ သစ်သီးစုံ၊ အလှုရှင်တွေရဲ့သဒ္ဓါတရား ထက်သန်မှုကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ပဒေသာပင်သီးနေတာလည်း တွေ့ တယ်။
ပစ့်ဘာ့ခ်ကို ဝင်လည်မယ်၊ လမ်းမှာ overlook လို့ ခေါ်တဲ့ ဗျူးပွိုင့်တွေမှာ ဓာတ်ပုံရို်က်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မလားဟေ့လို့မေးလိုက်ရင် အိပ်ချင်မူးတူး အသံလေးတွေနဲ့ဟင့်အင်းတဲ့။ ပင်ပန်းတာနဲ့ဘယ်မှာမှမရပ်ဘဲ မေရီလန်းပြည်နယ် ဖရက်ဒရစ်မြို့ နားက Rest Area လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်သာ၊ နားနေရာမှာ ဝိတ်လျှော့။ အလှုမှာ စားဖို့ အချိန်မရှိတော့လို့သယ်လာခဲ့တဲ့ အချိုပွဲတွေ၊ အိမ်ကယူလာတဲ့ လက်ဖက်သုတ်တွေ စားကြတော့ ကျောင်းမှာ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ ကို လက်ဖက်ကျွှေးခဲ့ဖူးတာ သတိရတယ်။ "ငါ့ရဲ့ ခံတွင်းတွေ့ မှုတွေကို နင့်လက်ရာအစားအစာတွေနဲ့မဖျက်ဆီးလိုက်ပါနဲ "ဆိုပြီး ကျွှန်မလက်ရာတွေကို ဘယ်တော့မှ မစားကြတဲ့ ဒင်းတို့ သုံးကောင် လက်ဖက်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ဘာလချောင်ကြော်ကိုတော့ စားကြတတယ်။ ရာမားနဲ့ မိုင်းက လက်ဖက်ချဉ်စပ် ကြိုက်တယ်။ ဆူနမ်က အကြော် ကြိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီလိုမျိုး ဂေါ်ဖီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့သုပ်တာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ယုဇနချဉ်စပ်လက်ဖက်ကို ဒီအတိုင်း ထမင်းနဲ့စားကြတာ။
လူစုံတော့ သတင်းလည်း စုံတာပေ့ါ။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုဖြစ်တာ၊ ဘာညာပေါ့။ နာမည်ရင်းမသုံးချင်လို့ကိုဒီလို့ ပဲ ဆိုပါတော့။ ကိုဒီက သူ့ အိမ်မှာ ငှားနေတဲ့ မြန်မာမနဲ့ ဖြစ်နေတာ သူ့ ကလေးက ပြောပြလို့မဒမ်ဒီက သိသွားတော့ ပွဲကြမ်းတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း သူက စတိတ်ရောက်တာ မကြာသေးဘူး။ အိမ်က ကိုဒီ့အိမ် မကျေနပ်ရင် နင် ဆင်းသွား ဒါ ငါ့အိမ်ဆိုတော့ မဒမ်ဒီက အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ဒီကောင် လွန်လွန်းတယ် အိမ်ပေါ်ပြန်မတက်နဲ့ဒီကောင် ခခယယ တောင်းပန်ပြီး လာခေါ်မှတက်လို့အကြံညဏ်ပေးတယ်။ ကိုဒီ လာခေါ်တာတောင် မစောင့်နိုင်ပါဘူး ကိုဒီ့ကို မခွဲနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။ ကိုဒီ ဖောက်ပြန်နေတာကိုလည်း ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။
ပြသနာကို သုံးသပ်လိုက်တော့ မဒမ်ဒီလည်း သူ့ ယောက်ျား တခြားမိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုသိတော့ ရင်ကွဲအောင် ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတယောက်တည်း ရပ်တည်ဖို့ ခက်တော့ ရင်နာနာနဲ့ပြန်တက်ရတာနေမှာပေါ့။ အစ်မတယောက်ရဲ့အဆုံးအမက အိမ်ထောင်ပြုလည်း အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ရမယ်။ ယောက်ျားသေသွားခဲ့ရင်၊ အိမ်ထောင်ကွဲသွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ ဒီခေတ်ကြီးကလည်း ကျွှန်မအဖေတို့ခေတ်တုန်းကလို အဖေလုပ်စာ သားသမီးတွေတပြုံလုံး ထိုင်စားလို့ ရတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ မိန်းကလေးတွေလည်း ကျွှန်မအမေတို့ခေတ်ကလို အိမ်ရှင်မသီးသန့် လုပ်လို့ မရတော့ဘဲ အလုပ်ထွက်လုပ်ကြရတာမို့အလုပ်မလုပ်တဲ့ အိမ်ရှင်မ နည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မဒမ်ဒီသာ ကုိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ့်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယောက်ျားကို ရင်နာနာနဲ့ပေါင်းမယ်မထင်ပါဘူး။
ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ ကို အားကိုးမဲ့ မိန်းကလေးကို ကြိုက်တာ၊ ကလဲရားလို စမတ်ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးကို တရုတ်ယောက်ျားလေးတွေ မကြိုက်ကြဘူးတဲ့။ အဲဒီစမတ်ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကလည်း သူ့ လောက်တောင် စမတ်မဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးတွေဆို အထင်မကြီးဘူး။ ထင်လိုနဲ့ ပဲ စမတ်ကလေးတွေ အပျိုကြီးဖြစ်ကြတာ ထင်ပါရဲ့း) ။ ခေတ်ပညာတတ်၊ အလုပ်လုပ်တဲ့ Professional women ဖြစ်စေဦးတော့ အိန္ဒိယမှာ ချွှေးမက အိမ်စေနီးပါးပါပဲ။ ယောက်ျားဆုံးသွားခဲ့ရင် သားယောက်ျားလေး မမွေးထားတဲ့ မိန်းမက အမွေတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက် တာလီဘန်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ ပါကစ္စတန်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ပညာသင်ခွင့် မရှိသလို၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတင် အတင်းအိမ်ထောင်ပြုခိုင်းတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ အမျိုးသမီးတွေ ကားမောင်းခွင့် မရှိပါဘူး။ အပျိုဘဝမှာ ဖခင်မျိုးရိုး နာမည်ယူပြီး အိမ်ထောင်ပြုတာနဲ့ယောက်ျားရဲ့မျိုးရိုးနာမည် ပြောင်းရတယ်။ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးတွေကတော့ အိမ်ထောင်ပြုလည်း နာမည်ပြောင်းစရာမလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပညာသင်ခွင့်၊ ကားမောင်းခွင့်ရှိတော့ သူတို့ တွေလောက် ဖိနှိပ်မှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်မှု ပိုရှိပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ထွက်လုပ်ရတာခြင်း အတူတူတောင် မိန်းမက မီးဖိုထဲမှာ ချွှေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်၊ ယောက်ျားလုပ်သူက အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ငါနဲ့ မဆိုင်၊ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အခန့် သားထိုင်နေရင် အမျိုးသမီးတွေ ပင်ပန်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် မိန်းမက ဂရုစိုက်လို့ယောက်ျားလေးတွေက ပိုခန့် လာပြီး မိန်းကလေးတွေကတော့ အပျိုဘဝကလောက် မလှနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်မိန်းမကို လှစေချင်ရင် အိမ်မှုကိစ္စ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပါ။ ကျွှန်အအဖေရယ်၊ ဘွန်လေးအိမ်က အိမ်ရှင်အမျိုးသားရယ်ကလွဲရင် အိမ်မှုကိစ္စကူလုပ်ပေးတဲ့ မြန်မာယောက်ျားလေး တော်တော်ရှားတယ်။
မင်းအမေရော၊ မင်းတို့ ကိုရော ဟင်းချက်သင်ပေးခဲ့တာလို့အဖေပါကွလို့ကျွှန်မအဖေက ဂုဏ်ယူလေ့ရှိတယ်။ မကြီးက လက်ရာကောင်းပေမဲ့ ဂျီးမများ၊ အရသာမသိ၊ ကိုယ်ချက်တာ ကိုယ်ဘာသာ စားကောင်းနေတတ်တဲ့ ကျွှန်မကတော့ အဖေ၊ အမေ၊ မကြီး သင်ပေးလည်း ညံ့မြဲညံ့ဆဲ။ အဖေက သူ့ မျက်စိမှာ ရှုပ်နေရင် တံမြက်စည်းယူပြီး ရှင်းလင်းလိုက်တာပဲ။ ယောက်ျားအလုပ်၊ မိန်းမအလုပ်လို့ခွဲခြားမနေဘူး။ ယောက်ျားလေးဆိုပြီး အခွင့်ထူးမယူ အိမ်မှုကိစ္စကူလုပ်တဲ့ မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတော့ အိမ်မှုကိစ္စ ကူမလုပ်တဲ့ ယောက်ျားလေးဆို အခွင့်ထူးယူတယ်ဆိုပြီး သိပ်ကြည့်မရဘူး။ အလုပ်ထဲမှာ Men and women are equal တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ Men are more equal နေသလားလို့း) ။
သူငယ်တန်းက သုံးတန်းအထိ ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ လေးတန်းကို မရမ်းချောင်ကျောင်း၊ ဟိုင်းကြီးရွာသစ်ကျောင်း၊ ငါးတန်းကို ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ ခြောက်တန်းကို စံထူး၊ စံပြ၊ အဏ္ဏဝါကျောင်း၊ ခုနစ်တန်းကို ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်းကို ပုသိမ် ထ ၂ ကျောင်း၊ ဆယ်တန်းကို ရန်ကုန် လှိုင် ၂ ကျောင်း အဲဒီလိုကျောင်းတွေကို လှည့်ပတ်တက်ခဲ့တော့ ကျွှန်မမှာ ငယ်သူငယ်ချင်း မရှိသလောက် ရှားတယ်။ ၁၉၉၉ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး လှည်းတန်းက ဆရာကြီးဦးမြကြိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်တော့မှ ရင်ဖက်ချင်းနီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဝတ်ရည်မောင်မောင်က အသားဖြူဖြူ၊ အရပ်ရှည်ရှည် ၊ ဇင်ယော်တောင်ပံမျက်ခုံး၊ မျက်ဝန်းညိုညို ဝိုင်းဝိုင်း၊ နှာတံပေါ်ပေါ်၊ နှုတ်ခမ်းပါးပါးလျလျ။ အဖေ၊ အမေဆီက အလှတွေ အကုန်ရထားပြီး အားလုံးထဲမှာ ထင်းကနဲ လင်းကနဲနေအောင် လှတဲ့သူ။ ပိုးပန်းတဲ့သူလည်း အတော်များတယ်။ ဒင်းတို့ ကြောင့် သင်တန်းပြီးရင် သူ့ အမေ ရုံးကားလာတဲ့အထိ ကမာရွှတ်အဝေးပြေးက နွားနို့ ဆိုင်လေးမှာ အထိန်းတော် ကျွှန်မနဲ့ ဖြိုးက စောင့်ပေးရတယ်။
ရွှေပြည်သာကျောင်းကို ပြောင်းလာတဲ့ ကိုးတန်းကျောင်းသူ ကတုံးမလေး ဝတ်ရည်ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်တက်မှ တပတ်စာသုံးစောင်ရေးပြီး ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ ရှားမှရှားတဲ့ မောင်စံရှားလို့ကျွှန်မတို့နာမည်ပြောင်ပေးထားသူက ဝေဖြိုး။ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်မှ အိမ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့ ဝေဖြိုးက ဝတ်ရည် အဖေနဲ့ အမေကို ကန်တော့တယ်။ အစကတော့ ဝတ်ရည်အမေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါပဲ။ နောက်တော့ ဝေဖြိုးညီမတို့စကားတွေ ကြားတယ်နဲ့တူပါရဲ့ဝေဖြိုးကို ဖြတ်ရင်ဖြတ် မဖြတ်ရင် သူ့ ကိုဖြတ်လို့ဆိုလာတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ သူ့ အမေကိုလည်း မဖြတ်နိုင်၊ ဝေဖြိုး တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတာကိုသိတော့ ဝေဖြိုးကိုလည်း မဖြတ်နိုင်။ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ဝတ်ရည်ကိုမြင်တော့ ကျွှန်မတို့ လည်း စိတ်မကောင်း။
ဝေဖြိုးကလည်း မပြတ်နိုင် မိဘတွေ သဘောတူအောင် ၃ နှစ် ကြိုးစားကြမယ်။ အဲဒီတော့မှ သဘောမတူရင်လည်း လက်ထပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ချစ်သက်တမ်း ၁၄ နှစ် ကြာပြီး ဒီနှစ် ဧပရယ်မှာမှ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲနိုင်တာပါ။ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ က ငွေရောင်သတို့ သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ဝတ်ရည် အရမ်းလှတယ်။ သူ့ မျက်နှာက အပျော်အပြုံးတွေက ကျွှန်မတို့ ကိုပါ ကူးစက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့ သမီးအရံလုပ်မယ်၊ လက်စွပ်ဗန်းကိုင်မယ်၊ ပန်းကြဲမယ်၊ ခရစ်ယာန်မင်္ဂလာပွဲတွေမှာလို သတို့ သမီးရဲ့လက်ကိုင်ပန်းကို ပစ်ခိုင်းပြီး ရအောင်ဖမ်းမယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြဖူးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေဟာလဲ အဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျွှန်မလို ဟိုးအဝေးကြီး ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စိတ်ကူးထဲက အိမ်မက်တွေလည်း တကယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွှန်မနှင့် သက်တူရွယ်တူ မိတ်ဆွေသစ်များ...း)
လူကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ တကယ်ချစ်ကြတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်အတွက် ပျော်လိုက်တာ။ ရာသက်ပန်ပေါင်းရဖို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ အောက်တိုဘာလလယ်က ဝေဖြိုးဆုံးပြီ သတင်းကြားတော့ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။ နေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ လည်း သတင်းမကြားဘဲနဲ့ ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာ ၆ လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်တော့မှ သိရတယ် အဆုတ်လေပြွန်ကင်ဆာတဲ့။ ကျွှန်မတို့ မှာ ဝတ်ရည်လေးအတွက် စိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ စကားကလွဲရင် အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့စကားတောင် ရှာမရဘူး။ ဝတ်ရည်က တချိန်လုံး ငိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းတုန်းက မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားပြီလားလို့ ပူပင်တုန်းက၊ ၂၀၁၁ စတိတ်ကိုလာတုန်းက ၊ ၂၀၁၃ ကန်တက်ကီရုံးကို ခွဲခွာရတုန်းက ရင်ဘတ်တွေနာအောင် ငိုကြွေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါတောင် ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ခွဲခွာရလို့ငိုတာ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်ကို နောက်ထပ်မတွေ့ နိုင်တော့၊ လောကကြီးက အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားပြီမို့ကြေကွဲခံစားနေရမဲ့ ဝတ်ရည်ကို ကျွှန်မ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ ခိုင်မေနဲ့ ဖြိုးက ရင်နာလွန်းလို့အတော်ငိုကြတယ်တဲ့။ ကျွှန်မလည်း ဝတ်ရည်ကို သနားလို့ငိုမိတယ်။ ကျွှန်မ ပြုလုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ဝေဖြိုးကို အမျှဝေပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖြိုးတယောက် ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ။
ကန်နွမ်ဘာ့ခ်တောလားဆိုပေမဲ့ ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ စတိတ်ရောက်ပြီး သုံးနှစ်အကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့သွားတဲ့ခရီး။ စတိတ်မှာ ခရီးသွားတယ်ဟေ့လို့ဆိုလိုက်ရင် မေးမနေနဲ့ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ နဲ့သွားတာ။ မြန်မာအစားအစာ၊ မြန်မာလူမျိုး၊ မြန်မာရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ကျွှန်မအတွက်တော့ မြန်မာပြည်ကို ခဏရောက်သွားသလို ခံစားရတဲ့တောလားလေး။
နိုဝင်ဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၃။
Hi Sann Sann;
Very Nice Furlough and I am happy with you.
လာလည်ရင် အဲ့တောလား စီးရီးတွေ လိုက်ပို့ပေးမလားး)
ညီမစန်းထွန်းရေ အကြောင်းအရာတွေ စုံနေအောင်
ဖတ်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲ။ ၀တ်ရည်လေးအတွက်လည်း တကယ်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
အလယ်ပိုင်းState တွေရောက်သွားရင် မြန်မာတွေနည်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့New Jersey New York မှာတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် ဆုံဖြစ်တယ်။
Khine : not happy furlough anymore. :D
မမအိုင်အိုရားသာမီးက အစုံသုပ်..း)
ကြောင်မျိုးးရောက်အောင်သာလာခဲ့...အဲဒီတောလားစီးရီးတွေအတိုင်း လိုက်ပို့ ပေးဦးမှာ...မယုံရင် ပုံပြင်လို့ မှတ်လိုက်...:P
မလေးမြတ်းဝတ်ရည်တို့ အကြောင်းကတော့ ကြားသူတိုင်း ရင်ထဲတမျိုးကြီး ဖြစ်စေတယ်..
goldfish : ဟုတ်ပါ့ အိုင်အိုဝါနဲ့ကန်တက်ကီမှာ မြန်မာနည်းသလောက် မေရီလန်းဖက်မှာတော့ မြန်မာတွေများသား...
long time no see. ဆံပင်တွေရှည်လာပါလားး)
မမအိုင်အိုရားအစုံသုတ်လုပ်စားရင် သာမီးကို ခေါ်နော်...:P
မဂျက်းမီနူးအသစ်ပဲနော် ထမင်းကြော်နဲ့ငပိရည်တဲ့...ဘိတ်ဖက်မှာတော့ ကြေးအိုးဆီချက်နဲ့ငပိထောင်း...
မြတ်ကြည်းမတွေ့ တာ အတောကြာပြီနော် နှစ်ပေါက်နေပြီ ထင်တယ်...glad to see you back...ဆံပင်လား ညှပ်ခဈေးကြီးလို့ ...:D